Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Mahita Andro Rolli manaitaitra ao Genoa ara-kolotsaina
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Andro Rolli ao Genoa ara-kolotsaina
Ny mpitsidika dia hanana fito andro mahafinaritra hahitana zavakanto italiana ao amin'ny lapa lehibe Renaissance sy Baroque ao amin'ny tanànan'i Genova any Italia.
Ny fitsangatsanganana any Genoa tamin'ny taonjato volamena, teo anelanelan'ny sary sokitra, fresco ary zaridaina, no fanokafana miavaka ireo tranon'ny World Heritage UNESCO.
Ny hetsika dia manomboka amin'ny 4 ka hatramin'ny 8 Oktobra 2021, mandritra ny Herinandron'ny Fandefasana Rolli, ary ny 9 ka hatramin'ny 10 Oktobra miaraka amin'ny Rolli Days.
Sambany, amin'ity fararano ity, ny Rolli Days - ilay hetsika izay manokatra ny varavaran'ny Palazzi dei Rolli, lova UNESCO - dia haharitra mandritra ny herinandro.
Ny haren-tsarimihetsika ao an-tanàna dia tranon'ny sangan'asa mampitambatra zavakanto italiana - Canova, Antonello da Messina, freskozy tamin'ny taonjato faha-17, lokanga an'i Paganini, ary zavakanto eropeana, indrindra ny kanto Flemish.
Ity herinandro ity dia fotoana iray hahitana ny tantaran'ny tanàna, iray amin'ireo seranana lehibe amin'ny Mediterane, tsy lavitra ny Alpes sy Milan. Ireo mpitsidika dia mifanena amin'i Genoa tsy mbola tazana, feno lapa mijoalajoala izay niaro ny harenany nandritra ny taonjato maro: tokotanin-tsambo, zaridaina, boribory fresco, sary sokitra tamin'ny faramparan'ny Renaissance, ary Baroque.
Ny fitsidihana dia tanterahina amin'ny fiarovana tanteraka sy amin'ny fanarahana ny lalàna mifehy ny COVID - maimaim-poana, saingy misy adidy amin'ny famandrihana, ary ny fisokafan'ny lapan'andriana dia miaraka amin'ny kalandrie feno hetsika fiantohana.
Ny fitsidihana ireo lapa sy tsangambato dia manomboka mandritra ny Herinandron'ny Fandefasana Rolli (4-8 Oktobra) miaraka amin'ny fiaraha-miasa Herinandron'ny fandefasana Genoa, ny hetsika biennial izay mampivondrona ireo mpandraharaha seranan-tsambo, an-dranomasina, ary logistika manerantany. Ireo lapa dia mampiantrano kongresy sy hetsika ara-kolontsaina, hafa noho ny vondron-dranomasina - mpandova tantara taloha, dia ny an'ny Repoblika Maritime izay misokatra ho an'ny besinimaro.
nahazoana lalana avy amin'i Laura Guida
Ny tena Rolli Days (9-10 Oktobra) dia mety indrindra amin'ny fahitana ny tanàna amin'ny hafainganan'ny tenany, tarihin'ny tantaran'ireo matihanina sy mpampita hevitra siantifika izay nitantara tantara, anecdotes ary zava-mahatalanjona an'ny “Superba”, mpanjakavavin'ny Mediteraneana. Roa andro fialamboly tsy miato ary fitsidihana hankafizanao ireo tsangambato mahavariana indrindra ao an-tanàna - ny lapan'ny Rolli ary koa villa, zaridaina, tranombakoka ary arisiva, dia ahitana tranobe misokatra miavaka amin'ny besinimaro amin'ity fotoana ity.
Ohatra, ireo tranobe mahavariana ao Strada Nuova - ilay Palazzo Doria Tursi mampientanentana, miaraka amin'ireo zaridainany roa - dia mampiseho ny lokanga nataon'i Paganini, fanangonana zavakanto Flemish, ary sangan'asa toy ny Penitent Magdalene nataon'i Antonio Canova. Manolotra fanangonana zavakanto italiana, flemish ary espaniola i Palazzo Bianco, ary i Palazzo Rosso dia gaga amin'ny fanaka tany am-boalohany sy ny sary misy sary hosodoko nataon'i Veronese, Guercino, Dürer, ary Van Dyck.
Amin'ny lalana iray ihany, Palazzo Nicolosio Lomellino dia unicum maritrano, misy efitrano stucco voaravaka freskozy tamin'ny taonjato faha-17 ary zaridaina miafina misy sary sokitra angano. Ny fitsidihana an'i Palazzo Stefano Balbi, toeran'ny tranoben'ny Royal Palace Museum, dia fotoana iray hahitana ny fiainan'ny andriana Genoese sy italianina tamin'ny taonjato faha-17, raha mankafy ny Hall of Mirrors, ny Throne Room, ary ny Ballroom.
Ao amin'ny rihana ambony amin'ny lapan'ny Spinola di Pellicceria, izay misy ny National Gallery of Liguria, dia mifanatrika amin'i "Ecce Homo" sangan'asan'i Antonello da Messina. Ny Palazzo della Meridiana dia miavaka amin'ny fomba fanaon'ny Liberty an'ny mpanao mari-trano - Coppingè, ary ny Palazzo Centurione Pitto dia mifaninana amin'ireo tranobe ao Via Garibaldi noho ny tsingerin'ny fresco.
Ivelan'ny afovoan-tantara dia ilay villa Villa del Principe, ilay trano Renaissance an'i Charles V, izay toerana voahodidin'ny zaridaina italiana mahafinaritra mijery ny ranomasina ny amiraly Andrea Doria.
Anisan'ireo villa suburban tsara tarehy nisokatra ho an'ny fotoana, misy ihany koa ny Villa Imperiale tamin'ny taonjato faha-16, izay misy ny tranomboky Lercari, miaraka amina zaridaina mahavariana iray amina terraces geometrika marobe - ny Villa Duchessa di Galliera, izay manjaka amin'ny havoana ambonin'ny tanànan'i Voltri ary manana zaridaina taonjato faha-18 miaraka amin'ny zaridaina italiana; fitoerana masina sy teatra fampakaram-bady tamin'ny 1785; ary ny Villa Spinola di San Pietro, fonja mpiaro ny taonjato faha-17 izay mipetraka ao amin'ny faritry Genoese avy amin'i Sampierdarena.
Rolli Days Live & Digital dia hetsika ampiroboroboana sy karakarain'ny Kaominin'i Genoa miaraka amin'ny Chamber of Commerce of Genoa, ny Ministeran'ny Kolontsaina - Sekretariam-paritry ny Liguria, ny Association Rolli an'ny Repoblika Genoese, ary ny University of Genoa.